Asa 10 - Ny Baiboly
Asa toko 10
Ny nisehoan'ny anjely tamin'i Kornely - Ny tsindrimandrin'i Piera - Piera tao amin'i Kornely - Ny nilazany ny amin'i Jesoa - Ny nidinan'ny Fanahy Masina.
1Ary tany Sezarea nisy lehilahy anankiray atao hoe Kornely, kapiteny tamin'ny antoko miaramila atao hoe Italiana. 2Olona tia vavaka sy natahotra an'Andriamanitra izy mbamin'ny ankohonany rehetra, ary nanao fiantrana be tamin'ny olona sy nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. 3Indray antoandro tokony ho tamin'ny ora fahasivy, dia nisy anjelin'Andriamanitra anankiray hitany miharihary tamin'ny tsindrimandry, niditra tao aminy, sy nilaza taminy hoe: Ry Kornely! 4Dia nijery azy izy, ka raiki-tahotra, sy nanao hoe: Ahoana, Tompoko? Ary hoy ny anjely taminy: Tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ho fahatsiarovana anao ny vavakao sy ny fiantranao. 5Koa ankehitriny, maniraha olona ho any Jope haka an'i Simona anankiray, izay atao hoe Piera. 6Mitoetra ao an-tranon'i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina izy, ary izy no hilaza aminao ny tsy maintsy hataonao. 7Nony lasa ilay anjely niteny taminy, dia niantso roa lahy tamin'ny mpanompony Kornely sy miaramila anankiray tia vavaka, anisan'izay nanao raharaha taminy, 8ka rahefa nitantarany ny zavatra rehetra izy ireo, dia nirahiny ho any Jope.
9Nony ampitso, raha mbola teny an-dàlana ireo iraka ireo, ka efa mby akaikin'ny tanàna, Piera kosa niakatra teo ambonin'ny tampon-trano mba hivavaka, tokony ho tamin'ny ora fahenina. 10Rahefa izany, dia noana izy ka te-hihinana; kanjo, ny olona nanao nahandro ho azy, izy azon-tsindrimandry. 11Nahita ny lanitra nisokatra izy sy zavatra anankiray toa lamba lehibe nifatotra tamin'ny zorony efatra, nidina avy any an-danitra ho ety an-tany. 12Ary tao anatiny nisy ny biby rehetra manan-tongotra efatra, sy ny biby mandady etý an-tany, ary ny voro-manidina. 13Dia nisy feo nanao taminy hoe: Mitsangàna, ry Piera; mamonoa ka mihinàna. 14Fa namaly Piera ka nanao hoe: Sanatria, Tompoko, tsy mbola nihinan-javatra fady sy maloto aho. 15Fa hoy indray ilay feo taminy: Aza ataonao ho maloto izay efa nodiovin'Andriamanitra. 16Intelo no naverina natao izany; dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra.
17Mbola mieritreritra ny hevitry ny zavatra hitany tamin'ny tsindrimandry eo Piera no izay tonga ao am-bavahady ny irak'i Kornely nanontany ny tranon'i Simona. 18Dia niantso izy ireo, ka nanontany raha mitoetra ao Simona, izay atao hoe Piera. 19Amin'izany Piera dia mbola nieritreritra ny fahitana eo ihany, ka hoy ny Fanahy taminy: Indreo misy olona telo lahy mitady anao; 20koa mitsangàna, dia midina, ary mandehàna miaraka aminy, fa aza misalasala, satria izaho no naniraka azy. 21Dia nidina niaraka tamin'izay Piera, nanatona ireo lehilahy ireo, ka nanao taminy hoe: Inty aho izay tadiavinareo; inona no anton'ny nahatongavanareo atý? 22Ary hoy ny navalin'ireo: Kornely kapiteny, lehilahy marina sy matahotra an'Andriamanitra ary ankasitrahan'ny Jody rehetra, no nahazo teny tamin'ny anjely masina anankiray mba hampaka anao ho any an-tranony, sy hihaino ny teninao. 23Dia nampiantrano azy mba handry ao i Piera.
Nony ampitso, dia niainga niaraka tamin'izy ireo izy mbamin'ny rahalahy sasany tao Jope. 24Ny ampitson'izay indray, dia niditra tao Sezarea izy. Efa niandry azy izany ry Kornely mbamin'ny havany sy ny sakaiza malalany izay nangoniny. 25Vao niditra Piera, dia notsenain'i Kornely, ka sady niankohoka teo an-tongony izy no nitsaoka azy. 26Fa nasain'i Piera nitsangana izy, nataony hoe: Mitsangàna, fa olona ihany aho. 27Sady niresaka taminy izy no niditra tao an-trano, ary namantana olona betsaka tafavory tao. 28Dia hoy izy tamin'izy ireo: Fantatrareo fa fady amin'ny Jody ny mikambana amin'ny jentily na ny miantrano ao aminy; nefa nasehon'Andriamanitra ahy, fa tsy misy olona azoko atao hoe maloto na tsy madio. 29Koa tsy nisalasala aho, fa nandeha raha vao nampanalainareo, ka inona àry izato anton'ny nampangalanareo ahy? 30Dia hoy Kornely: Hefarana androany izay, raha nivavaka sy nifady hanina tao an-tranoko aho, dia indro nisy lehilahy niakanjo fotsy nitsangana teo anatrehako tamin'ny ora fahasivy, ka nanao hoe: 31Ry Kornely, nekena ny vavakao, ary notsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. 32Koa maniraha ho any Jope, ampanalao Simona izay atao hoe Piera, mitoetra ao an-tranon'i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina, fa izy no hilaza aminao. 33Dia naniraka ho any aminao niaraka tamin'izay aho; ka tsara ny nahatongavanao. Koa ankehitriny, vory eto anatrehanao izahay rehetra, mba hihaino ny zavatra rehetra asain'Andriamanitra lazainao aminay.
34Dia niloa-bava Piera ka nanao hoe: Hitako marina tokoa fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra: 35fa izay matahotra azy sy manao ny marina, dia nankasitrahany, na aiza na aiza firenena misy azy. 36Nampitondra teny tamin'ny zanak'Israely izy, mba hanambara fiadanana amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy, izay Tompon'izao rehetra izao. 37Fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'i Jodea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian'ny batemy notorin'i Joany: 38dia ny amin'i Jesoa avy any Nazareta, izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny Fanahy Masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa hatraiza hatraiza, nahasitrana izay rehetra azon'ny demony, satria nomba azy Andriamanitra. 39Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra nataony tany amin'ny tanin'ny Jody sy tany Jerosalema. Dia novonoiny izy nahantony tamin'ny hazo; 40nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, sady nasehony miharihary, 41tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavolombelona efa voatendrin'Andriamanitra rahateo, dia taminay, izay niara-nihinanan sy nisotro taminy; rahefa nitsangana tamin'ny maty izy. 42Izy nandidy anay hitory amin'ny vahoaka sy hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. 43Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin'ny anarany no ahazoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka.
44Mbola miteny eo i Piera no nidina tamin'izay rehetra nihaino ny teniny ny Fanahy Masina, 45ka talanjona fatratra ny mpino voafora tonga teo niaraka tamin'i Piera, nahita fa nidina tamin'ny jentily koa ny fanomezan'ny Fanahy Masina, 46satria reny niteny fiteny samihafa sy nankalaza an'Andriamanitra izy ireo. 47Dia hoy Piera: Azo lavina tsy hatao batemy amin'ny rano va ireto olona efa nandray ny Fanahy Masina toa antsika ireto? 48Koa ireo nasainy hatao batemy amin'ny anaran'i Jesoa-Kristy Tompo; izy kosa nangatahin'ireo hitoetra eo aminy andro vitsivitsy. >